Tom Howard - Alamino ny fivoriana paikady miaraka amin'ny mpisolovava mpanafika antsika
Ny rongony dia orinasa mitombo haingana miaraka amin'ny sakana amin'ny lalàna mifehy sy fifaninanana tenda - ny mpisolovava rongony marina dia afaka manampy ny orinasa rongony.
Nahoana ny orinasanao marijuana na hemp dia mila mpisolovava rongony?
Ny maso roa mijery ny fanatitrao izay manome fomba fijery mahomby dia mety hahomby ny orinasa iray. Nihaona tamin'ny mpisolovava iray, ohatra, i Warren Buffett Charlie Munger tamin'ny 1959 ary tiany tokoa ny heviny ka nandresy lahatra azy hiala ny fampiharana lalàna ary hiaraka aminy ao Berkshire Hathaway. Ny mpisolovava cannabis izay manana sy manodina orinasa eo amin'ny indostria ary manana fahalalana lalina momba ny risika sy fironana iray dia afaka manampy ny orinasanao hahazo tombony amin'ny fifaninanana ary hanalefaka ny risika miasa.
Izahay dia handrakotra tombontsoa lehibe 5 omena amin'ny alàlan'ny fananganana mpisolovava ho an'ny orinasanao rongony vaovao. Manakarama mpisolovava ny orinasa hanampiana ny orinasany amin'ny karazan-javatra rehetra. Ireto misy tombony dimy azo ampiharina indrindra azon'ny mpisolovava orinasa rongony ho an'ny ekipanao:
Fampahalalana momba ny fizotran-javatra mifototra sy ny fahazoan-dàlana
Fahatakarana ny fanarahana ny lalàna federaly sy ny fanjakana
Fahatakarana ny fifanarahana ara-barotra amin'ny fandidiana
Fanandramana sy fahalalana teo amin'ny indostria teo aloha
Mitantana ny risika ny fitrandrahana orinasa cannabis
Hodinihinay ireo tombontsoa dimy ireo amin'ny fahazoana mpisolovava ny cannabis amin'ny asanao.
Manontania hevitra a rongony na mpisolovava hemp momba ny asanao cannabis.
Ny cannabis dia tsy mitsaha-mitombo amin'ny fampiasana sy ny malaza manerana an'izao tontolo izao. Izay noheverina tany am-boalohany dia fady, mahazo laza, fankasitrahana ary traction any amin'ny firenena maro any Etazonia miaraka amin'i Washington, DC efa nanara-dalàna ny fambolena sy ny fananana ary ny fampiasana marijuana. Raha ara-dalàna tanteraka ny hemp rehefa avy nesorina tao amin'ny Lalànan'ny Fanaraha-maso mifehy ny raharaha Volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018.
Raha hiteny isika, firenena maherin'ny 33 any Etazonia no nanara-dalàna ny karazana rongony iray ho toy ny fitsaboana ara-pahasalamana tena ilaina sy azo antoka.
Na dia nanova ny fomba fijeriny ny rongony aza ny besinimaro, manomboka ny orinasan-tsinim-paritra sy ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny asa, dia asa mahomby izy io amin'ny fiheverana ny fiovan'ny lalàna sy ny lalàna federaly.
Raha mpandraharaha manana fientanam-po ianao amin'ny zotom-po hidirany amin'ity tsena mitombo ity, dia asaina ianao manakarama mpisolovava cannabis manam-pahaizana. Ny tanjona voalohany amin'izany dia ny hiantohana ny asa aman-draharahanao mifanaraka amin'ny lalàna rehetra misy anao.
Androany isika dia handinika ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fahazoana mpisolovava cannabis rehefa manao ny fivarotana rongony, na hemp, na fanafody, na marijuana.
1. Fepetra takiana sarotra & vidiny avo hiditra amin'ny indostrian'ny rongony
Ny fanjakana tsirairay dia manana lalàna samihafa mifandraika amin'ny fananganana sy ny fanaraha-maso ny orinasam-bola rongony. Fanjakana maro no nametraka fitsipika henjana momba ny isan'ny orinasa cannabis izay afaka miorina amin'ny fotoana iray.
Ny vokatra dia ny fanjakana sasany dia tsy manome fahazoan-dàlana mandritra ny varavarankely fampiharana tery fotsiny izay manana vidiny tena lafo sy fifaninanana mafy ho an'ny lisansy.
Matetika kokoa noho ny tsy fangatahana dia takiana ireo mpampiasa fangatahana handoa vola be amin'ny fikasana hiteraka tombony lehibe ho an'ny fanjakana fahazoan-dàlana.
Ohatra tonga lafatra dia i Connecticut, izay mandoa onitra $ 25,000 tsy voaloa ho an'ny kandidà mitady fahazoan-dàlana ho an'ny orinasan'ny rongony. Raha ilaina an-tsaina io fandaniana lehibe io, ny mpisolovava tafahoatra dia hanampy anao hahatakatra ny fomba hahavitana ireo fepetra rehetra mifehy ny fahazoan-dàlana sy ny fangatahana hamerenana ny vidin'ny sarany.
2. Ireo mpisolovava amin'ny rongony dia mahatakatra ny lalàna federaly sy ny fanjakana
Ny sasany amin'ireo mpandraharaha voanioka dia manana ny fahatakarana ny lalàna momba ny marijuana ao amin'ny fanjakany ary miezaka ny hanaraka azy ireo. Na izany aza, noho ny antony iray na roa, dia mbola mety hieritreritra ny tsy ara-dalàna ny orinasany ny governemanta federaly ary manafoana ny fahazoan-dàlana.
Ilay mpisolovava cannabis manampahaizana manokana manampy anao hahatakatra ny lalàna federaly sy ny fanjakana mba ahafahanao manana vintana tsara kokoa amin'ny fanatanterahana ny fahombiazana maharitra mandritra ity orinasam-bola mahasoa ity.
Ny fananana mpisolovava cannabis eo ambonin'ny oniversite dia manaporofo fa ilaina amin'ny maha-ara-dalàna ny fanombohanao. Ny famaritana ireo vokatra na serivisy tianao atolotra dia tena ilaina raha toa ny fandehanana any amin'ny fandraharahana.
Ny orinasan'ny rongony dia voasokajy ho sokajy telo samy hafa, ary ny vondrona tsirairay dia manasongadina ireo fenitra sy fitsipika samihafa.
Ny mpisolovava za-draharaha iray dia hanampy anao hahalala ny sokajy manokana izay ivoahan'ny orinasan-drongony. Toy izao manaraka izao ny sokajin'ny orinasa rongony marika:
(i) Fambolena - Ny fambolena marijuana dia voafehin'ny fanjakana isan-karazany mba hiantohana vokatra avo lenta sy azo antoka ary mahomby. Ny fambolena zavamaniry rongony dia mila fampiasam-bola be sy ny fanoloran-tena mafy. Ny mpisolovavanao dia hanampy anao hanomboka amin'ity orin'asa ity hiantohana ny fahalavorariana horticultural.
ii) Infusion - Mpandraharaha maro no manangana orinasa marobe miatrika ny fivarotana ny tincture sy ny fanodinana entin'ny cannabis. Ity bandy mahery mampino ity dia aingam-panahy amin'ny fitomboan'ny fandalinana siantifika izay mitaky ny tombony mahasoa rongony amin'ny fitsaboana. Betsaka ny lalàna noforonina tany amin'ny fanjakana isan-karazany mba hitondrana ny akora sy ny labika ary torolàlana momba ny fanompoana ho an'ny vokatra ireo.
iii) Ny fivarotana - Ny orinasan-marika izay voasokajy ao anatin'ny sokajy fivarotana dia misy ny fotoam-pivoriana sy ny fitsaboana. Matetika, ireo fivoriambe ireo dia mivarotra ny vokatra any amin'ireo olon-tsotra sy ny marary izay mihoatra ny 21 taona. Ny vidin'ny fanombohana amin'ny fametrahana ny fivarotana fivarotana no lafo indrindra, fa matetika izy ireo dia miteraka tombony lehibe kokoa noho ny karazana orinasan'ny rongony rehetra.
3. Ny mpisolovava cannabis dia mahatakatra ny fanarahan-dalàna
Ny mpisolovava iray izay tena mifanakalo amin'ny lalàna federaly sy fanjakana misy rongony dia hanampy anao hamantatra ireo fepetra manokana ampiharina amin'ny sokajy manokana ny orinasanao marijuana. Ny fahafantarana ny fepetra takiana amin'ny fangatahana, ny fahazoan-dàlana sy ny famatsiam-bola amin'ny orin-tsika dia singa manan-danja amin'ny fananganana sy ny fikolokoloana orinasa marijuana.
Ny mpandraharaha rongony na hemp dia manandrana mitety ireo teknisiana ireo ary tsy misy farany afa-tsy ny vola entiny.
Ny dingana tafiditra amin'ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa sy ny fitadiavana famatsiam-bola dia mety miovaova tanteraka amin'ny toeram-ponenanao. Tsy voaloa ny saram-pampianarana amin'ny faritra sasany ary matetika dolara an'arivony dolara tsy misy fiantohana. Ny fanaraha-maso ny tarika iray dia mety ilaina amin'ny toe-javatra sasany mba hanalavana ireo olona meloka izay manaporofo ny tantara fa misy herisetra na fandikan-dalàna.
Ambonin'izany, firenena maro no manana lalàna mametra ny isan'ny rongony rongony izay azo apetraka amin'ny faritra iray. Niteraka fiakaran'ny vidim-piainana sy fifaninanana izany. Ny fanjakana hafa dia mandeha mandroso lavitra kokoa ny manontany momba ny loharano ara-bola mba hanamarinana raha manana hozatra ara-bola handrakena ny fandaniana toy ny hofan-trano sy ny fampitaovana ianao.
Any Illinois, ohatra, ny fanjakana dia mety mitaky orinasa mariharo narosony ho an'ny loharanom-bola tsy mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa dolara mba hananganana sy hampandehanana ny asa. Ny fanjakana koa dia mety mangataka ny hahita ny fepetra fiarovana be dia be nomen'ny tompona orinasa mba hahazoana antoka fa tsy mifarana amin'ny tsena mainty ny rongony vokarina amin'ny fanafody - na tsy nahy na ninia.
Ankoatra ny lalàna mifehy ny fanjakana, ny governemanta sy ny tanàna eo an-toerana dia mety manana ny fomba fiasa mifehy ny orinasa rongony. Ny governemanta eo an-toerana dia manao fisafoana ho an'ny tompona orinasa rongony sy ny mpiara-miasa aminy ho fepetra takian'ny fahazoan-dàlana.
Raha jerena ireo vidiny lafo ireo, ny fahazoana mpisolovava ny cannabis hanampiana anao hitety ireo antsipirihany ara-teknika ireo no hevitra tsara indrindra alohan'ny handrosoana. Ny tsy fanarahana ny fepetra takiana dia mety hiteraka onitra, fanafoanana ny fahazoan-dàlana, ary ny andraikitra amin'ny heloka bevava amin'ny sazy hafa.
4. Mahazo ny orinasam-bazimbazimbazaha an-tsaha
Ny fanombohana sy fitazonana orinasa bizina dia mety ho ezaka mafy. Ankoatra ny sakantsakana mahazatra toy ny fidiram-bola, ny fivarotana, ny fifandraisan'ny mpanjifa ary ny fitomboana, ny orinasa cannabis dia tsy maintsy manaraka ny lalàna sy ny fitsipika rehetra - na miomana hiatrika ny vokatr'izany. Miaraka amin'ny mpisolovavan'ny cannabis marina eo anilanao, ny orinasanao dia afaka atao mialoha ao amin'ny fototra tsara mba hiantohana ny fitomboana sy ny fanitarana.
Raha tsy misy mpisolovava dia mora ny mahita anao mandeha amin'ny tsipika tsy manadino izany noho ny toetran'ny lalàna tsy miova izay mifehy ny orinasa rongony. Be dia be ny fiampangana heloka bevava mety hiteraka anao amin'ny orinasa rongony ary misy ny fotoana mety hitranga am-ponja, ny fandrahonana amin'ny fanakatonana orinasa, ary ny onitra sy ny sarany hafa.
Ny mpisolovava marina dia tsy hiaro anao amin'ny fiampangana azy ihany fa hiaro ny lazany amin'ny asanao ihany koa. Ny orinasam-barotra rehetra dia mila mihodina ao anaty fehezin'ny lalàna mba ahafahan'ny mijanona miasa. Farany, mendrika ny asanao mahomby ny orinasanao raha tsy misy adin-tsaina fanampiny hiatrehana ny olana ara-dalàna.
5. Famerana ny loza mety amin'ny orinasan-drongony na Hemp
Ny fananganana mpisolovava cannabis dia fomba tsara hanamaivana ny loza mety hitranga amin'ny orinasanao. Amin'ny lafiny iray, ny rongony dia mijanona ho zavatra tsy ara-dalàna eo ambanin'ny lalàna federaly, ary tsy misy fanavahana amin'ny fanjakana izay nanara-dalàna ny fampiasana azy ho an'ny tanjona ara-pitsaboana na fialamboly. Amin'ny lafiny iray, ny olona izay manaraka ny lalànan'ny fanjakana dia tsy misy atahorana hosamborina na fitsarana ataon'ny manampahefana federaly.
Vokatr'izany dia omena toro-hevitra ny tompona orinasa marika rehetra mba hanaraka ny lalànan'ny fanjakany amin'ny fikasana hamerana ny mety hisian'ny fanenjehana amin'ny heloka bevava ary ny mety ho fatiantoka amin'ny fampiasam-bola. Ny governemanta federaly dia mitsinjo hatrany ny fandraharahana izay tsy voaaro ambanin'ny lalàna marijuana ho an'ny fanenjehana.
Izy io dia miompana amin'ny fanenjehana ireo voarohirohy amin'ny heloka bevava toy ny fizarana rongony amin'ny alàlan'ny tambajotram-piaramanidina voarindra, ny fitaterana zava-mahadomelina, ny fizarana rongony amin'ny zaza tsy ampy taona, ary ny hetsika hafa tafiditra amin'ny tsy fanarahan-dalàna.
Miaraka amin'ny mpisolovava manam-pahaizana momba ny cannabis eny ambony sambo, azonao atao ny manome toky ny laharam-pandraharahanao amin'ny fomba iray izay ahafahana mampihena be ny risika amin'ny fanenjehana federaly.
Amin'ny orinasan'ny rongony, ny fahadisoana tokana dia mety hiteraka anao any amin'ny fitsarana federaly ary handany ny volanao. Iray amin'ireo hadisoana iray ireo dia ny fanakaramana ny mpiasa. Raha mikasa ny manakarama mpiasa vaovao ianao, dia hanampy anao amin'ny lalàna manan-kery sy fiantohana ny mpisolovava cannabis.
Eritreritra farany momba ny mpisolovava cannabis
Ny orinasam-barotra tafiditra amin'ny fambolena na fivarotana rongony dia mitera-doza tokoa. Noho izany antony izany, mahasoa anao indrindra ny mandinika ny fahazoana mpisolovava cannabis ho an'ny orinasanao.
Ny mpisolovava cannabis dia tsy manampy amin'ny famonoana ny loza ara-bola ateraky ny orinasa rongony fotsiny ihany fa miantoka ny antontan-taratasy sy ny fangatahana fahazoan-dàlana ihany koa.
Raha jerena ny vidin'ny fanombohana, ny fahasarotan'ny fitsipika tafiditra ary ny loza ateraky ny fanenjehana federaly, toa ny fandaniana ara-dalàna ny mpisolovava iray. Ny fiezahana handika ny lalàna cannabis amin'ny tenanao irery dia mety handany fotoana sy mampifangaro.
Mifandraisa amin'ny mpisolovava rongony hiresaka momba ny safidinao sy hiarovana ny faharetan'ny orinasanao. Tompon'ny orinasa ny anay, toa anao ihany.